Minisitra Harry Laurent Rahajason : « Hahafahan’ny rehetra maneho hevitra ilay « plateforme de dialogue » -
AccueilSongandinaMinisitra Harry Laurent Rahajason : « Hahafahan’ny rehetra maneho hevitra ilay « plateforme de dialogue »
Minisitra Harry Laurent Rahajason : « Hahafahan’ny rehetra maneho hevitra ilay « plateforme de dialogue »
13/05/2017 admintriatra Songandina 0
Miteraka tsy fitovian-kevitra amin’ny ankapobeny ny lalàna mifehy ny fifandraisana. Ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ny ministeran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana hametraka sehatra iray hifampidinihan’ny rehetra na ny « plateforme de dialogue ». « Antsoina ho tonga haneho ny heviny amin’io sehatra io ireo mangina, tsy fantatra na manaiky na mandà, ireo manohana izany ary ireo mitsipaka io tolo-dalàna», araka ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, Harry Laurent Rahajason, taorian’ny fihaonana nataony omaly tamin’ireo filohan’ny Parlemanta roa tonta. « Fotoana io ahafahan’ny rehetra miresaka an-kitsipo manodidina ny asan’ny serasera, ary fomba iray hanatsara izany ny fihaonana », hoy ihany ny minisitra. Vinavinan’ny minisitera ny hanatanterahana io « sehatra ho an’ny fifampidinihana » io amin’ny volana ho avy. Ny tanjona amin’izany dia ny mba hitovizan’ny tadin-dokanga amin’ny fikirakirana ny asa fanaovan-gazety sy ny hisian’ny fitoniana eo am-panatanterahana an’io asa masina io.
Na ny filohan’ny antenimeran-doholona, Honoré Rakotomanana teny Anosy, na ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy teny Tsimbazaza dia samy nanamarika ny andraikitry ny serasera eo amin’ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny sy ny maha saropady ny asa fanaovan-gazety. « Misokatra midanadana ihany koa ny fiaraha-miasa ho anareo eo anivon’ny Mcri », hoy Jean Max Rakotomamonjy filohan’ny Antenimieram-pirenena.
Nivoitra nandritra ny fitsidihana nataon’ny minisitry ny Mcri sy ireo mpiara-miasa aminy ihany koa ny fifandraisana eo amin’ny governemanta sy ny fahefana mpanao lalàna. « Hisy ny fifanatonana sy fiaraha-miasa mba ahatomombana ny fifandraisana eo amin’ny parlemantera sy ny mpanatanteraka, tanjona ny hisian’ny fifandraisana, fifanajana ary ny fiaraha-miasa ao anatin’ny fanajana ny fisarahan’ny fahefana », hoy ihany ny minisitra.
Anisan’ny andraikitra goavan’ny parlemantera ny fametrahana ireo tolo-dalàna avy amin’ny mpanatanteraka. « Mandrafitra fotsiny ny tolo-dalàna mpanatanteraka fa ny fahefana mpanao lalàna no manana fahefana sy tompon’ny teny farany amin’ny fametrahana azy ireny ho lalàna », hoy hatrany ny fanamarihan’ny minisitra, Harry Laurent Rahajason.
Taorian’ny fihaonana tamin’ny filohan’ny antenimiera roa tonta, dia nihaona tamin’ireo mpiasan’ny ofisim-pirenena ho an’ny onjampeo sy ny televiziona malagasy (ORTM) ny minisitra. Nisy ny dinika sy fampitan-kafatra nataon’ny minisitra tamin’ireo fianakaviamben’ny Ortm ireo.
Tanteraka ny fanamby. Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly, ny tobim-piantsoNan’ny taksiborosy nampitondraina ny anarana “Maki”, eny Andohatapenaka. Tobim-piantsonan’ny taksiborosy misahana ireo zotra rezionaly sy nasionaly? izay tafiditra indrindra tao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena. Raha ny mikasika ...Tohiny
Robert Yamate : Izay candida tsy mahafeno fepetra, tsy tokony hilatsaka
Mpikambana ao amin’ny SADC : Nahatsapa ny fivoarana tsara eto Madagasikara